Kedu ihe bụ Fox Live valve? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Valvụ dị ndụ - ngwọta dị irè
Valvụ dị ndụ - ngwọta dị irè
Kedu ihe bụ Fox Live valve?
Na-egosiNdụ Valve, anyị kachasị dị na kọmputa na-achịkwa usoro nkwụsịtụ maka igwe kwụ otu ebe. Featuring ultra-ngwa ngwa mmeghachi ihe mmetụta naihekasịvalvụmgbe kereFOX,Ndụ Valveakpaghị aka na-edoziihendụdụ na ujo onwe ha dị kaiheala gbanwere.
Nabata na ihe ngosi GMBN nke izu a. Adị m n'izu a, Doddie apụla n'ezie, ọ na-edozi ụlọ ya echere m, mana ọtụtụ akụkọ igwe kwụ otu ebe dị jụụ gụnyere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ọhụrụ, ọhụụ ọhụrụ Scott Ransom, ọhụụ ọhụrụ Trek, titanium hardtail na gia tinyere Fox's ohuru ndụ nkwusioru usoro. (Knife nkọ) (beeping) Ọ dị mma, yabụ igwe kwụ otu ebe m ga-agbago na ụkwụ ikpeazụ nke EWS afọ a bụ akara ọhụụ Scott Ransom nke bịara taa.
Anọ m na-agba ya ruo oge ugbu a, ọ bụ nnukwu igwe kwụ otu ebe. 170 mm nke njem na Scott Twin Lock system. Yabụ na ị nwere ọnọdụ zuru oke, ị nwere njikwa mkpofu ebe ọ na-ebelata njem ahụ, mana na-agbanwekwa nkwusioru ahụ iji mechie ọnụ ụlọ ahụ na damper ahụ iji jide n'aka na ọ na-emetụta igwe kwụ otu ebe na ọ bụghị naanị ibelata njem ahụ.
Ọ na-eme ka igwe kwụ otu ebe nọdụ elu karịa mgbe ị na-abanye ma rịgoro nnukwu nnukwu ugwu. Ha na-anọdụ ala karịa elu, na-eme ka igwe kwụ otu ebe, dị mma maka ụdị ihe omume. Ọ na-agba na 29 ma ọ bụ 27.5 'wiil.
mmechi onye nkuzi nkwusioru
M na-agba ịnyịnya 29 'wiil nke m na-amasịkarị maka agbụrụ dị anya ka m wee nwee ike ịnyagharị na wiil ndị ahụ, Ọtụtụ atụmatụ dị jụụ na ọ bụ n'ezie Dirt Shed Show n'izu a na Tech Week Week. Ya mere, ọ bụ otu ụdị okirikiri ahụ Scott ji maka Spark ya, mgbe ahụ Genius ya, ma ugbu a, ihe mgbapụta ya kwuru na ha nwere ike iburu ọtụtụ ibu site na nkwado ala. Nke a bụ ike carbon etiti Scott wuru.
Dị ka ị ga-atụ anya n’aka Scott, ọ bụ nnukwu ọkụ, yabụ maka ikuku carbon kacha elu na damper gbakwunyere ngwaike damper, ọ dị na 2650 gram maka etiti etiti na maka ụdị dị ọnụ ala, yabụ maka igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala, 3050 grams maka carbon n'ihu ọgwụgwụ na aluminum n'azụ ọgwụgwụ. A ole na ole n'ezie dị mma nkọwa na a igwe kwụ otu ebe: Ọbụna Gịnị na-agba ọsọ na ala mgbodo nke etiti kama na-agba ọsọ na mpụga ebe ha nwere ike ịbụ ewekarị na-ada ada nkume mgbe ọduọ. Enwere onye nchebe na nnọchi ahụ na ịnọ ọdụ naanị iji mee ka ihe dị jụụ.
Have nwere nhọrọ nke ndị na-ebu ikuku ikuku na-adọkpụ na ndị na-atụ ụjọ na igwe kwụ otu ebe. Ihe ọzọ mara mma na igwe kwụ otu ebe dị elu bụ Fox Nude TR EVOL damper. Ya mere, enwere ike iji mmiri nke Scott jiri sistemụ Twin Lock, mana ị nwekwara ebe mgbago ahụ.
Dị nnọọ mfe, ịnwere ike ịgbanwe igwe kwụ otu ebe site n'usoro usoro gaa n'oké ujo nke na-enweghị atụ. Igwe ohuru ohuru bu ohuru ohuru nke Trek Remedy, nke ka bu igwe eji eme njem 150mm nke nwere uzo 164 n'ihu - i ghaghachigharila n’elu ugwu di ala. Ha na-ekwu na naanị n'ihi mmụba ndị dị na teknụzụ ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ka ha nwere ike nweta mmetụta dị ala ha chọrọ n'ezie.
O nwere oghere nwere okpukpu anọ n'okpuru tube elu iji tinye usoro wiilị Wolf ToothB maka nchekwa ngwaọrụ. O nwere otu usoro ABP ochie nke nwere mmeghari site na uzo. Ọ nwere akụkụ slack-n'ihu site na 66 ruo 65.5.
O doro anya na ọ bụghị nnukwu mgbanwe, mana enwere ike ime ya na a. Enwere ike ịchọtaghachi mgbawa 66 Mino Link. Ọ nwere otu ogo steeper oche akụkụ na otu nso.
Fox Suspension webatara sistemu nkwusioru ohuru a iji mee ka elektrọniks ọzọ jiri igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ nwere ọtụtụ ihe mmetụta niile na igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe na-emetụta ihe ị na-agba ka ọ mara ọbụna mgbe ị na-aga ala ma ọ bụ ugwu. Ọ nwere ihe abụọ accelerometers, abụọ na ndụdụ ndụdụ na otu dị nso na azụ azụ.
Ọ na-atụle ọsọ nke ngagharị na ụjọ. Super nkọ stof. A na-eziga data ahụ na usoro valve dị ndụ nke na-ekpebi ụzọ igwe kwụ otu ebe na-adabere na ma ọ dị n'ikuku.
A na-ezighachi ọrụ ahụ na ndụdụ ma ọ bụ na-emeghe iji meghee damper ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Oge dị n’agbata mmetụta na ọ bụ nke absorption bụ naanị 3 milliseconds. Enwere ike idozi uche ahụ site na obere nkedo hexagonal n'elu ndụdụ ahụ yana ọnọdụ mepere emepe na ọnọdụ edozi.
Enwere ike ibo onye njikwa ahụ ebubo ma ọ bụ gbanyụọ igwe kwụ otu ebe ma bụrụ nke na-egbochi ihu igwe kpamkpam, dịka ị ga-atụ anya n'aka teknụzụ ụdị Mack ọ bụla. Ugbu a, ọ na-agbakwunye banyere 144 gram na igwe kwụ otu ebe. Ọnụahịa ahụ, ah nke ahụ bụ ebe kicker dị.
O sitere na $ 3000 maka ndụdụ 32-tojupụtara na $ 3250 maka 36, ​​obere maka ndị ahịa OEM. Ugbu a bụ oge maka ihe ọzọ. Kedu maka hardtail titanium nwere Pinion gear? Lee anya na nke a, ọ bụ igwe kwụ otu ebe.
E nwere ụdị abụọ nke ya. Otu obi abụọ, ọ na-abịa 130 ma ọ bụ 150mm nkwusioru ndụdụ ma ọ bụ a emepụta na a 140 ma ọ bụ isiike. Anyị ahụwo ụfọdụ ndị na-emepụta n'ezie ịnyịnya ígwè na gia Ka m mara ihe ị na-eche.
Nkọwa n'okpuru, Enwetụbeghị m ụzọ tupu anyị agagharị. Anụla m na ụgbọala ụgbọala na-emepụta obere esemokwu, mana ịnya mackhas n'azụ kwesịrị ịbụ ezigbo ihe m chere. Ọrịa ịnyịnya ígwè ka ulo oru a KickStarter maka a zuru-nkwusioru igwe kwụ otu ebe na nnyefe.
Rụzuru ihe mgbaru ọsọ ego gị n'ime awa 24. Otú ọ dị, ịnyịnya ígwè virus na-ada ọnụ dị oke ọnụ. Ha abụọ na-eri ihe ruru puku dọla anọ na ọkara maka okpokoro na ụgbọala a. Uwe ejiji nke 100 weputara mkpokọta ọdịda ọhụụ, yabụ, ha mere ka ọtụtụ uwe ha dị ugbu a wee mezue ụdị uwe aka niile.
Ihe ohuru bu cognito glove nwere nchedo nkwonkwo ụkwụ, n’enyeghi nkasi obi maka onye na-acho. Anyị nwere atụmatụ ọhụrụ na agba maka iko gị RaceCraft Plus. Loic Bruni na-eyi ya n'ezie mgbe ọ meriri Mont-Sainte-Anne.
Nakwa ndozi ndị ọzọ na ahịrị iko ndị ọzọ dịka Strata Forecast na ahịrị Accuri. E13 amalitela oke akara aka nke carbon Gwin. Naanị usoro 25 dị n'ụwa niile.
Carbon rim, oge ndụ gị niile, ọ bụkwa ebe a na-etinye ahihia carbon. Ya mere, oche 650p, nke doro anya na Aaronwasn adịghị agba ha n'ọsọ egwuregwu ikpeazụ nke ụwa mgbe ọ na-agba ịnyịnya ígwè 29er, kamakwa cassette nwere ọsọ ọsọ asaa maka obosara taya na-atụ aro gburugburu 2.3 ruo 2.6.
Ya mere, ọgba tum tum abụọ ikpeazụ Doddie gosipụtara na ihe ngosi ahụ enweela mmeri, ebe Richie Rude meriri n'ezie na California Enduro Series na Yeti SP150 ọhụrụ. Ma Marty Maes meriri agbụrụ La Bresse site na iji akara ọhụụ GT Fury. Kedu ihe na-esote? Ọ dị onye ọ bụla ga - emeri n'ọsọ a na Scott Ransom? Kpamkpam ọbụghị m, amaara m n'ezie, mana enwere ike mmadụ nwere ike. (mkpọtụ) Ugbu a, oge eruola maka Igwe Igwe.
Ugbu a, anyị nwere ọtụtụ ntinye maka ya, mana ọ dị mma ịhụ ebe ị na-eche maka igwe kwụ otu ebe na ebe ị debere ha, mana na-eziga ha site na onye na-ebugote anyị, nkọwa dị na ihuenyo ugbu a. Ma ka anyị banye ma leba anya n'ọgba ịnyịnya nke Angelo. Ya mere, lelee ọgba igwe nke Angelo.
Ya na nwanne ya nwoke nwekwara ọtụtụ ihe. Lee anya na quad m na-agba ịnyịnya ma na-agba ịnyịnya ụdị ihe niile, nwere BMX, quads. Nwanne ya nwoke bụ BMX, lelee ya, ọ kwalitere ya n'ụzọ ụfọdụ, rụgharịa ya ọzọ.
Ahụrụ m ya n'anya! Ha nwere ọtụtụ ihe dị jụụ ebe ahụ, nnukwu ihe eji arụ ọrụ, igbe na ngwa ọrụ ha niile, m kwụgidere ha na mgbidi, ọ masịrị m ịme nke ahụ n'onwe m mgbe m guzobere ogbako ka ị nwee ike nweta ngwa gị n'èzí etinyeghị ha na igbe ọrụ Hụ ya n'anya. Ọgba igwe kwụ otu ebe ọzọ si na Gaz, bụ onye m na-agbaba n'ime ya Ahụrụ m ya n’ọsọ Hard Rock izu ole na ole gara aga ma ahụrụ m na Forest Heat n’izu gara aga.
Ana m ahapụ ya ka ọ kparịta ụka n'ihi na ọ nyere anyị ịgagharị ọgba ọgba igwe ya - Hi Doddy, a ga m eme ka ị gabiga ọgba ọgba tum tum m ọsọ ọsọ, chere na m ga-emere gị obere edemede. Ihe dị mma karịa foto ole na ole, dị nnọọ ndagwurugwu. Yabụ ee, ebe m na-adọba ụgbọala, n'otu oge ahụ nwekwara obere ohere nchekwa, mana anyị nwere ike ịrụ ọrụ na nke ahụ.
Ihe dị ka ihe ndozi ụgbọelu m, nganga m na ọ joyụ m, ikuku m dị elu 9. N'ebe a, Analog Cube m nke m gbanwere n'ime igwe kwụ ọtọ, yabụ enwere m crank Brothers clips na ya na ụfọdụ taya okporo ụzọ. Enwere m onye na-enye ọzụzụ turbo na ya mere enwere m ike ịkwanye ihe niile ma weghachite onye nduzi turbo ahụ.
Bike ebe. Ọ zụtara ya naanị £ 60. Mee ụfọdụ ọrụ maka ya.
Igwe kwụ otu ebe nke nwunye m, nke a naghị ejikarị eme ihe, ọ na-echekwa ị nweta igwe eletrik na ịkụtu ụzọ ụkwụ ka ya wee nwee ike ịnọnyere m, anyị nwekwara ihe ndị dị ka onye na-eme njem ochie na ụfọdụ akụkụ ahụ mapụtara, wdg. The wheel m ga-atụgharị n'ime nche, rim n'ezie ewepụghị gburugburu ya rim abaghị uru ọ bụla mmadụ ma ọ bụ anụmanụ a bit ma ọ bụ ihe ịchọ mma. Nwa m nwoke ji egwuri egwu gwongworo, ọ na-enwe mmasị iso ya pụọ.
Ọ nwekwara ezigbo njikwa ka ọ ghara ịpụ n 'ihu ụgbọala. Obere igbe nchekwa ebe ahu na ihe omuma. Okwu pelican juputara na ngwa ma okwu a juputara na ngwa ahia mgbe m puru maka izu uka ma obu njem dika ya, odi nma ma dikwa nma ma nwee ike ijide ihe m nile.
Tebụl ochie na-ama ụlọikwuu n'ebe ahụ ka anyị ji arụ ọrụ. Nwee uwe aka abụọ, sprays dị iche iche, mmanụ, teepu gorilla, teepu mastic, nke abụọ bụ ihe ofufe. Igbe dọrọ kwa, yabụ ebe ọ bụ na akụkụ ahụ mapụtara niile agaghị m agha ụgha, ebe ị nwere ike ịhụ na ha niile nọ n'ụdị oge ahụ.
Ọ dịghị mma, m ga-ahụ otu mpempe akwụkwọ ma tinye ya na mgbidi azụ ebe ahụ, dọrọ gburugburu ngwaọrụ wee pịa oghere ole na ole na ya, ma mee onwe m akwụkwọ ọkpọ. Bent rotor, yabụ onye a nwetara oke ọhịa Dean na ngalaba osisi ebe ahụ. Naanị ihe mkpofu nwere ike ime ka ihe dị mma na ebe ahụ.
Enwekwara m nọmba ọnụọgụ m niile site na afọ ole na ole gara aga gụnyere nke a Nke a bụ nọmba UK UK Gravity Enduro m ugbu a. Yabụ ee, enwere m olile anya na ị nwere ọ enjoyedụ ilebanye anya na ogbako m na oge ọzọ ị ga-anya naanị 900 m n'ebe m nọ na Fox Woodsit, wee tie m mkpu - na nke ahụ mechara bụrụ nnukwu, ọ sitere n'aka Steven, onye Bristolian nwere biri na Sweden afọ iri na ise wee chịkọta ịnyịnya ígwè. O nweghi ugboala, ya mere igwe igwe bu ihe ya.
Ugbu a lee anya na nke a, ka anyị bido na bọọdụ ngwa ọrụ ya. O yikwara ka ọ nwere ụda olu mara mma nke etinyere n'ime mgbidi ahụ. Ibu ngwaọrụ. (mumbles) Enweghị ike ịhụ ha niile ka ha mee ihe n'eziokwu, mana lee igwe kwụ otu ebe.
Ego ole ka ọ nwere n'ebe ahụ? Ọ nwere ihe skuta, nke anaghị agụta, mana ndị scoot abụọ. Enwere ihe ochie GT Karakoram, echere m, na ihe edo edo na oroma. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu m nwere ike ịhụ, enwere igwe kwụ otu ebe ịzụ ahịa.
Kedu ihe bụ nke ahụ? Ancillotti Trialbike, nke ahụ gbawara site n'oge gara aga. Ọ bụ uche! Oke ọnụ ọ bụghị ya? Nke ahụ ọ bụ ihe igwe na-awụ akpata oyi? Echere m na ọ bụ ha. Oh lee anya na nke ahụ.
Kedu ihe bụ nke a? Okporo ụzọ ịnyịnya ígwè na ọdụ dị nro na valvụ atọ na ya na pint biya biya n'azụ, Enwere m mmasị na pint biya karịa igwe kwụ otu ebe, ime ihe n'eziokwu, Steven? Skuuta a na-amasị m. Na njikwa aka, oke nkume, ọ bụ ndụdụ indie? Knowsnye maara ihe ị na-eji igwe kwụ otu ebe a. Live bi na Sweden, ọzọ.
Kedu ụdị iberibe bụ nke a? Enweghị echiche. Ọ nwere Maghera High Drive rim n'ihu. Na azụ.
Bịa, nke a bụ GT Karakoram. Nke ahụ masịrị m. Enyi m nwoke nwere otu n'ụlọ akwụkwọ na 90s.
Enwere m mmasị na agba na igwe kwụ otu ebe ndị a. Nkume ọzọ na-ama jijiji, nke ahụ ọ bụ Indie kwa? Echetaghị m, m ga-eche na ọ bụ onye ọzọ. Site na ndị GTs ochie a, ị na-agbaji azụ.
Ọ dịghị mma maka ihe ọ bụla, karịchaa mgbe ọ dị mmiri mmiri. Lelee ngwaọrụ yinye, enwere m otu n'ime ndị a, enweghị ike icheta onye mere ya. Ezigbo mma.
Canyon, dị ka Grand Canyon, ya mere n'oge a. Ọtụtụ ihe m iko tii. Ma ugbu a, ị nweela ọkara biya.
Kwesịrị ịbụ ogologo ụbọchị na ogbako ahụ. Girvin Flexstem, enwebeghị nke dị otu a, mana amaara m site na ahụmịhe na ndị ọzọ gwara m na mgbe ị kụrụ ngọngọ, ọ bụghị naanị na ụdị mgbanwe a, mana ihe niile na-aga n'ihu, yabụ na-adịchaghị mma. Are sila n'ụdị.
Legodi GT a, iche iche ndị a? N'ụzọ ụfọdụ ịmara na ị nwere ike iwepụ efere ndị a, amaghị ma ọ bụrụ na ị gbanwere ha. Kedu ihe na-eme ebe a? Nke a bụ ụdị nke a micro skuuta na ihe nwere ihe yiri ka efu Ogwe na onye ọ bụla na a di na nwunye nke skateboard wiil n'ihu. Steven, o doro anya na ị dị ntakịrị, mana m hụrụ ọgba ịnyịnya ígwè gị n'anya maka izipu ya na (Rewind teepu) Ọfọn, enwere ọtụtụ ịghaghachi na ọgba tum tum, mana lelee izu a, anyị nwere ụfọdụ oké anyịnya igwe.
Anyị nwere Tom si Seattle ndị tụtụtara 1993 GT Team Avalanche a. Ugbu a, afọ ndị a bụ afọ ọma nye m. Nke a bụ mgbe m na-amalite ịgba igwe ugwu, ọ dị mma ịhụ ọgba tum tum ndị a.
Tom kwuru na ọ tụtụrụ ya na ịntanetị maka ọnụ ala. Ogwe osisi, Rock Shox's Judy SL. M hụrụ n'anya agba odo.
A na-edochi akụkụ n'akụkụ ụzọ, mana nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ kemgbe '93 na ọ na-eme atụmatụ ịga n'ihu na ịnya ụzọ ụkwụ mpaghara. Lee anya na nke ahụ. Ugbu a lee anya igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụ mara mma nnukwu etiti m na-eche, ma ọ dị mma. Echere m na ị chọkwara taya mgbidi mgbidi na azụ iji mee ka igwe kwụ otu ebe mara mma. Ọ dị m mma nke ukwuu, ọdịdị ahụ na-eme ka ọ dị laa azụ, ụdị akụkụ ahụ n'ụgbọ ụkwụ ndị a, ya na okpukpu atọ triangle ha nwere dịka anyị hụrụ na Karakoram, ka dị mma ugbu a.
Ahụrụ m nke ahụ n'anya, na-ekele Tom. Ugbu a site na Janne si Finland, onye nwere Cannondale M900 a, Killer V800. Ihe '95 M900, nke '97 Killer V.
A '97 Super V 400 na nke a '98 Raven. Ugbu a Raven bụ ezigbo akara ngosi. Chain, a brek, na njikwa na handlebars, lelee isi butt na ka na-eme ebe ahụ.
Nke ahụ ka dị mma nke m chere. V400, ndị a na taya anya ibu m ochie, ma ọ bụghị na a ezi ụzọ na-eme ihe n'eziokwu, ndị Panaracercer. Oge zuru ezu iji jụụ.
Chei, wiil ndị ahụ na M900 a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ dị ka ụdị onye na-ebu ozi New York, enwere m mmasị igwe kwụ otu ebe dị mma maka nke ahụ. N'ikpeazụ, Ryan si Texas zigara Trek 930 SHX a site na 1994.
O zigara n'ezie otu isiokwu nke ya na-agba ịnyịnya ígwè a na Washington ọ dị mma ịhụ ya ka ọ na-eji ezumike ezumike ahụ kwere nkwa 'ịghara ime ihe niile n'ọdụ ụgbọ elu' mana enweghị ike iguzogide iso nna ya gbagoro. Ọ ka nwere '94 Trek 920 ya nke siri ike. Ya mere, ọ na-ekwu na ọ ka na-ekpori ndụ na igwe ochie ndị ochie, mana ọ na-enwekwu obi ụtọ na igwe kwụ otu ebe a, lelee ya, Rockshox ndụdụ n'ihu, nwee ụfọdụ nnukwu aka ochie na-agwụ na ya, mana ọ dị mma, na igwe kwụ otu ebe a. na ịlaghachi ma echefula iji onye na-ebugote anyị, zitere anyị nke gị site na njirimara m na ngosi izu na-abịa. (pịa) ụfọdụ nnukwu mods kachasị elu n'izu a lelee nke mbụ a, ọ bụ onye nzuzu.
Nke a bụ otú Jolly si mee ka ọpụpụ mmiri na-arụ n'ụlọ C post na South Carlina. Nụtụla ụdị ihe a? Ya mere o ji mee ya site na mgbapụta ala na ogidi C ochie. Amaara m ihe na-eweli mkpuchi gị n'ụgbọala.
ikuku oyi na-emekpa akpa ume
Ya mere lelee ya, ọ bụ n'ụzọ nkịtị naanị ụdị oche post, mba, ala mgbapụta bụ n'èzí. Amaghị m otú o si kwekọọ na igwe kwụ otu ebe ya. Lee ụdị mkpịsị odee nke ị ga-adọpụ.
Nke ahụ bụ echiche zuru oke. Ọ ga-amasị m ịhụ ya na arụmọrụ iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ, mana Jolly, nke a bụ ihe magburu onwe ya. Agaghị m eche banyere ya n'onwe m.
Nke na-esote ya bụ Andreas na Worms, Germany, yabụ anyị ahụla azịza ole na ole dị iche iche maka ịwụnye ngị kalama maka okpokoro na-anaghị enwekarị ihe nkedo. Yabụ nke a bụ ihe nkwụnye ihe eji agba karama nke SKS jikọtara ya na oghere mkpuchi magnet magidị nke Doddie gosipụtara na ngosipụta GMBN gara aga. Amaara m na ahụrụ m nke ahụ tinye na nke ohuru ọhụụ nke Cannon.
Nice Andreas, nke ahụ dị mma. Dịkwa ezigbo ọkwa. Nwere ike iru kalama ahụ? Echere m na ị nwere ike ọ bụrụ na ị banye n'ime.
You nweta ya? Ọ bụ ezigbo ihe ngwọta maka okpokolo agba na-enweghị m enweghị mpempe mpe karama a. Nke ikpeazụ anyị si n’aka Paulio si Brighton na Great Britain. Reen Kona Processand nyere ya ọrụ agba ọhụụ ọhụụ.
N'ihi ya, ọ dị ka ọ mara mma, igwe kwụ otu ebe ga-abụrịrị nke enweghị oke, akụkụ ya niile. Ọ bụ nnukwu igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma ịhụ ndị na-arụ ụdị ọrụ agba agba ugbu a, mana ị naghị ahụ ya oge niile. Anụkwara m na ndị mmadụ na-akwakọba igwe kwụ otu ebe.
Mma. Ọ bụ ezigbo ihe ngwọta ma ọ bụrụ na ịchọọghị agba igwe gị. (Beeping) Tech nke izu nke a izu bụ ohuru Scott Ransom na m na-ekwu banyere na mbụ na show.
ígwè na cacao
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ edemede izizi zuru oke, pịa ebe ahụ m ga-agwa gị okwu site na mgbagwoju anya nke igwe kwụ otu ebe a ma m ga-agakwa ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe omume 2 nke ihe dị mkpa anyị ebe Jess na-akọwara gị ihe niile gbasara mkpịsị breeki, pịa ebe ahụ. Nye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ị hụrụ GMBN Tech n'anya, ma echefukwala ịpị bọtịnụ ntinye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Fox Live valvụ dị mma?
Maka obere ọgba tum tum njem dị mkpụmkpụ, echere m na Fox Live dị ezigbo ọnụ ahịa. Ọ bụ ihe ịtụnanya, ịtụnanya usoro.Eeh, ọ bụ nsụgharị mmepụta mbụ ma site na oge ọ ga-adị obere, dị ọcha, ma nwee ogologo ndụ batrị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ imeri agbụrụ ugbu a, echere m na ọ dabara adaba maka ọrụ ahụ.bọchị 2020
Ego ole ka ụjọ Fox ji?
Ikuku nke taaegwudị kaFoxDPX2atụle496 grams (nke dabere na ya), NkumeZụMonarch Plus RC3, gram 335 (nke dabere na ya), na Cane Creek's DB Air, gram 500 (nke dabere na ya).11 jan. Ọkt 2018
Hey ụmụ okorobịa, Joe si AmericanTrucks na taa anyị na-arụ ọrụ na FOX 2.0 Performanceseries n'azụ IFP damper, nke kwesịrị ekwesị maka usoro niile na-agba ịnyịnya elu ruo na Silveradoor Sierra 1500 nke si na '77 ruo '18 zuru oke ntinye-ọkwa maka Silverado- Onye nwe ya nke na-achọ obere ọrụ na-apụ apụ site na chassis ha na-adịghị mma. Yabụ kedu ihe anyị nwere ebe a na FOX 2.0 Performance? Ka anyị bido site na aru nke mmiri ozuzo ahụ site na 6061-T6 ụgbọ elu aluminom.
Nke a dị mma maka ikpo oku ikuku. Mgbe ị tinyere nke a site na ngbanwe ya, esemokwu na-emepụta okpomọkụ nke bụ ihe na-abụghị ihe ị chọrọ Shock Fade. Aluminom a ga - agbasasị ngwa ngwa o kwere mee ma nyere ha aka iguzogide mmegbu a.
Banyere osisi, nke a bụ 5/8 inch chrome steel alloy, maa ihe ị ga-atụ anya na usoro nke anwụ ngwa ngwa, inwe ike iwere ihe a na-akpọ IFP damper. Na-anọchi maka esịtidem sere n'elu pistin. Ihe nke ahụ na-emere gị bụ na a na-agbanye mmiri mmiri n'ime n'akụkụ nke damper ahụ ozugbo agbakọtara.
IFP ahụ na-enwe nrụgide na mmiri mmiri eji eme ihe iji jide n'aka na ọ nweghị cavitate, nke bụ isi obere ikuku egosipụta. Anyị niile makwaara na ikuku na-adị mfe ịmịkọrọ karịa mmiri nke hydraulic na nke ahụ bụ ihe ga - eme ka ujo gị kwụsị IFP ga - enyekwa aka iguzogide nke ahụ. Na mgbakwunye, anyị nwere ihe ị na - apụghị ịhụ n'ezie ebe ahụ, ngwụcha anodized.
Nke a ga - adị oke otu dịka ihe mkpuchi mgbochi na - egbochi mgbochi. Dịka m kwuru na mbụ nke a ga-adaba na ịdị elu nke ngwaahịa ma ọ bụ ruo 1 inch Liverado ma ọ bụ Sierra. Ọbụlagodi na ịnweghị mgbanwe ndị ọzọ n’ụgbọala gị, nke a ga-abụ nnukwu nwelite.
Ọ bụrụ na ị nwere 1 inch inwego na ọ bịara na-enweghị bumps, nke a ga-abụ a zuru okè ngwọta maka gị Ọfọn, otu n'ime ihe ndị kasị ukwuu na-agbakwunye na-agba ịnyịnya àgwà nke FOX Performance bụ eziokwu na ọ bụ a nitrogen jupụtara damper eme. Ugbu a nke ahụ pụtara na ọ na-agba ịnyịnya ntakịrị, mana nkwekọrịta ebe a na-abịa na arụmọrụ. Nkwụnye ụgwọ nitrogen a ga-enyere aka iguzogide cavitation wee belata mgbe ọ na-efu oke mma.
Nke ahụ apụtaghị na nke a ga-abụrịrị ihe ngwọta na-ekwesịghị ekwesị maka gị, azụmaahịa ahụ dị obere ebe a, mana ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na ndị a bụ obere stiffer. Ma ha ga-eme nke ọma karịa ụzọ. Yabụ ọnụahịa ebe a ga-adị gburugburu akara $ 130. na nke ahụ bụ ụgwọ maka nanị otu damper.
Ya mere maka di na nwunye ahụ, anyị na-ele anya na gburugburu $ 260. Ọ ga-abụ ntakịrị ọnụ karịa ugbu a, mana ị ga-enweta otu n'ime ogo mutes kachasị elu site na otu ụdị kachasị na ahịa. Can't nweghi ike ịgahie, ha ruru ọnụ ahịa ya.
Ntinye maka ihe ndị a ga-adị mfe, maa otu n'ime mmiri atọ na mita anyị nwere nsogbu. Ọ bụrụ na ọ gafee gị otu awa iji mee akụkụ abụọ ahụ, na-enweghị mgbatị ọzọ, ka m gosi gị ụdị ngwaọrụ ị ga-achọ yana otu esi eme ya. Ngwaọrụ achọrọ maka nrụnye a bụ ntụmadị ma ọ bụ akara aka, ihe nkpu 21 millimita, nkedo nke atọ na nke iri na isii, mkpọtụ, na ọkpọ, ma ọ bụrụ na ụgbọala gị dị nchara dị ka nke anyị, nke a bụ otu iko iko dị mma. kwadoro.
Ihe mbụ anyị ga-eme ebe a, ka anyị lekwasị anya na ugwu ugwu a dị ala. Nke a ga - abụ 21 millimita ịghasa na 21 millimita ịghasa aku. Ọ bụrụ na ịnweghị nke ahụ, ịnwere ike iji mgbatị 13-nke iri na isii.
Anyị ga-ewepu ya. Ugbu a amaara m na oke uzuzu ga-apụta, yabụ ọ nwere ike bụrụ ezigbo echiche ịnwe iko nchekwa n'aka tupu ịme nke a. Ugbu a nwa okorobịa ahụ mara ezigbo mma ebe ahụ ka m wee nwee ọkpọ, pịa ugboro ole na ole, mgbe ahụ, m ga-eji mkpọ, kụọ akụkụ ala nke isi ịghasa.
Naanị m ga-ahụ mkpọtụ. Aga m eji eri nke ịghasa n'onwe m, tọpụ ha n'ụzọ ụfọdụ ma jiri ọrụ ahụ kpochapụ kpamkpam. Ugbu a, maka ihe nkwado dị n'elu, anyị ga - ewere naanị 21 millimeter soket anyị ma wepụ ihe a.
Na nke ahụ, damper ahụ kwesịrị ịda ada ozugbo n'ụgbọala ahụ. Ya mere, site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị, anyị chere, ugbu a bụ oge zuru oke iji tinye ya na tebụl na-esote ọhụụ FOX ọhụrụ anyị ma tụọ ụfọdụ ndịiche dị mkpa ebe a. Nnukwu ihe dị iche m kwuru na mbụ agaghị ahụ anya ugbu a. ọ ga-adị na ndị na-ama jijiji.
Nke ahụ ga-abụ, FOX ọhụrụ anyị bụ ihe ịtụ ụjọ na-ebu mmanụ nitrogen. Na nke ọzọ pụtara na ọ na-agba ntutu siri ike mana ọ na-esikwu ike karị na cavitation, yabụ na-ekpo ọkụ, ọ gaghị adịkwa mfe dị ka ụlọ ọrụ a. Cavitation bụ isi na-egosipụta na mmiri ahụ, na egosipụta egosipụta doro anya na ọ kpachapụrụ ntakịrị karịa mmiri hydraulic, yabụ ụgwọ nitrogen ga-eguzogide nke ahụ ma merie mmejọ ugboro ugboro karịa ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe a na-atụ ụjọ ga-adị ukwuu maka ịgbasa ọkụ ahụ, na nke a alloy steel shaft will be great for durability ka i wee tinye ya site na ule a na-ata ahụhụ ma nagide mmegbu.
Ma ọ bụghị nke a bụ ọzọ a doro anya anodized imecha ọ ga-idi ihe ọcha a bit mma karịa anyị factory ujo. Yabụ, na-ebutụbeghị ya, anyị ga-eweghachi ya n'ụgbọala anyị. Anyị ga-achọkwa ngwaike anyị wepụrụ ozugbo, anyị ga-etinye ya na otu ụzọ anyị si wepụta ya.
Anyị ga-amalite echichi a n'elu. M ga-etinye ọdụ ahụ elu ebe ahụ, mgbe ahụ, m ga-ewere ihe nkedo m wepụrụ wee gbanye ya, site n'aka, maka ugbu a. Aga m amalite ihe kpatara ya ka c na-aga ụdị ntụgharị mgbe anyị na-eme nke a.
Ugbu a, ọ bụrụ na m na-atụgharị nke a n'okpuru ị ga-ahụ na anyị nọ naanị ihe dịka ọkara sentimita asatọ ka m wee nwee ihe mgbatị dị n'okpuru gwongworo ebe a iji dọpụta azụ azụ elu ntakịrị ntutu, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ala ijide n'aka na ewepuola nkwanye ọkụ ahụ. Ma ị nwere ike ime otu ihe ahụ na jaak ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke a dị ka m.
Ugbu a, anyị ga-amali elu, sere na uko ma mee otu ihe ahụ n'ala. Nke ahụ ga - eme ya maka nyocha m na ntinye nke FOX 2.0 Performance Series n'azụ IFP damper maka ọnụọgụ ngwaahịa dị elu ruo 1 inch '07 site na '18 Silverado ma ọ bụ Sierra 1500.
Daalụ maka ikiri, abụ m Joe. Dị njikere maka ịdenye aha na isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a na ihe niile gbasara Chevy na GMC.
Kedu ka egwu Fox si arụ ọrụ?
Dampers na-amị ma na-agbasa ike. Mgbe mmiri na damperọrụọnụ, a na-enye gị ikike ịchịkwa ụgbọ gị. Na isi ha,egwutọghata ngagharị nke ụgbọala ka ikpo n'imeujo. Mgbe ahụegwuigbari na okpomọkụ n'ime ikuku.June 2. 2020bọchị 2020
Abụ m Ryan si extremeterrain.com na nke a bụ nyocha m na ntinye nke Fox 2.0Performance Series Adjustable Reservoir Shocks, kwesịrị ekwesị maka 2007 na mgbe niile JKs.
N'ezie, dampers ndị a dị maka ma ihu na azụ nke JK gị. Ha dị maka otu na ọkara na atọ na ọkara sentimita asatọ nke ọrịa strok ma ọ bụ sentimita anọ na isii nke ọrịa strok, ma ọ bụrụ na ị nweta kit maka obere ọrịa strok, enwere kit nke gụnyere mmadụ anọ niile na-atụ ụjọ. zoputa gi ego ole na ole. Taa, anyị ga-atụle ịwụnye ihe ndị a na-awụ akpata oyi n'ahụ, nke bụ ntinye dị mfe site na iji otu n'ime ụzọ atọ.
Ndị a, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ, arụnyere na ụlọ ọrụ ahụ site na iji nrụnye ngwaike ụlọ ọrụ na Jeep gị n'ihe dị ka ọkara elekere kwa elekere anya dị mfe iji wụnye. Ma ọzọ, anyị ga-ekwu maka nke a na nke abụọ. Anyị ga-ekpuchikwa atụmatụ ahụ na ụfọdụ Ọrụ nke ụdị ndị a na-atụle ịtụnanya.
A ujo bụ naanị akụrụngwa na-emetụta ịkwọ ụgbọala ma na-anya ụgbọ ala nke ụgbọ ala Jeep gị kachasị. Ma enwere ụdị dị iche iche dị iche iche nke ujo. Enwere ndị na-ekpo ọkụ jupụtara na nitrogen dị ka nke ị na-ahụ ebe a ma enwere ndị na-a shockụ mmiri.
Ugbu a, mgbe onye na-awụ akpata oyi n'ahụ rụsiri ọrụ ike, dị ka ọnọdụ ọsọ ọsọ n'ọzara na-agba ọsọ na Washfords, mmiri nke dị na mmiri ọ bụla nwere ike ịmalite obụpde, afụ, cavitate, nke nwere ike ibute ọgbụgba ahụ na-ada. Ugbu a, nitrogen na-akwụ ụgwọ n'ihe ọkụkụ dị ka nke a bụ iji kpochapụ cavitation ahụ ma kpochapụ ujo ahụ. Ugbu a, ọdọ mmiri na-aga n'ihu.
Tankgbọ mmiri a na-ebugharị na-enye ohere maka mmiri na nitrogen na-ebuwanye ibu, na-eme ka onye na-ama jijiji a na-atụkarị ụjọ. Ugbu a, ihe ọtụtụ n’ime anyị ji eji ụgbọ mmiri anyị, anyị agaghị arụ ọrụ siri ike nke na ị ga-ada nnukwu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe onwunwe a nke damper, a hydrogen jupụtara hydraulic damper bụ ụzọ dị mma isi na-aga. a ujo bụ na ọ ga-abụ kemeghi.
Yabụ ọ bụrụ n 'ịchọrọ imeziwanye draịva gị, njikwa ya, na ụzọ ọpụpụ ya na ike gị n'okporo ụzọ nke JK gị, ọ dị mfe iji ihe ndozi, kemeghi na-emegharị dị ka ụzọ ụzọ asatọ nwere ike ịgbanwere n'akụkụ nke tankị gbasaa. . Ugbu a, ọtụtụ ndị na-amị amị amị na ụdị ụfọdụ ndị ọzọ na-atụ ụjọ nwere ike iwughachi ya na valvụ dị iche iche. Agbanyeghị, nke a na-eme ka ọ dị mfe ịgbanwe ọkpụkpọ ahụ n'ụlọ ma metụta ogo nke ụgbọ gị, yana ị nwere ike ịhụ na nke a bụ ọdụ mmiri jupụtara na nitrogen, ihe ndozi na-eme ka ihe gbanwee.
Nke a nwere ọtụtụ mgbịrịgba na mkpọrọhịhị na ọ sitere na ụlọ ọrụ ahụ emeela ọtụtụ nyocha nke a maara n'ezie na ụwa na-agba ọsọ ma tinye ọtụtụ teknụzụ ahụ n'ime ndị a na-atụ ụjọ. Yabụ ị ga-akwụ ụgwọ maka ihe a na-awụ akpata oyi n'ahụ na mpaghara ọnụahịa dị elu, nke ọma na nke na-agbanwe agbanwe. Dị ka aha ahụ na-egosi, nke a bụ Fox's Performance Series damper, ma ha nwere usoro arụmọrụ, ha nwere usoro Adventure, ha nwekwara Usoro Mgbanwe Ngwaahịa.
Ugbu a na Performance Series ga-abụ ihe nlereanya kachasị elu. Nke a bụ 6061-T6 aluminium damper nke nwere doro anodized imecha ya ka ọ dị mma akwa FOX damper ị ga-esi na igbe ahụ ga-adị ogologo oge. Fọdụ n'ime ala dị ala nke FOX dampers na-ekpuchikwa ntụ ntụ, ma ọ bụ na ha adịghị elu dị ka nke a.
Uzo ozo di ole na ole ndi ozo bu uzo e ji eme osisi, wuo ya ma jiri ya meputa ihe iji jide n'aka na ohia a noro na ogologo oge. Nke a damper, ebe ọ bụ na o nwere mgbasa tank, na-abịa na ihe aluminom mgbodo na-enye gị ohere ịghasa mpụga mgbasa tankị isi ahu nke ujo absorber, ma ọ bụ n'ezie na ị nwere ike remotely efego mmeba tank na etiti ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. Have nwere ntakịrị eriri igwe anaghị agba nchara ebe a ka inwee ntakịrị mgbanwe ka ị na-etinye ọdọ mmiri.
N'ikpeazụ, dịka m kwuru, n'elu ebe a, ị nwere cliclic asatọ nke mkpakọ ọnọdụ. Yabụ ị nwere ike ịhazigharị njikwa na njirimara ịkwọ ụgbọala nke damper a n'ụzọ dị nnọọ mfe. Ebe ọ bụ na e guzobere damper a kpọmkwem maka JK gị, ọ nwere ike ịgbachi ya ozugbo n'ọnọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị, na-eme ka nrụnye dị mfe, dị mfe.
Dị ka m kwuru, otu n'ime ụzọ atọ maka ntinye a na-erughị ọkara elekere pershock. Ihe niile ị ga - eme iji wụnye nke a bụ jaep na moto jiipu, wepụ taya ka ịnweta ebe a na-etinye akwa mmiri. N'ihu i nwere nkedo nkpuchi di ala na ihe nkpuchi di elu, n'azu i nwere nkedo nkpuchi di ala na nke abuo di elu nke na-abanye n'ime ala nke tub.
Ihe ị ga - eme bụ wepu ngwaike ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ na draper ọhụrụ gị n'ọnọdụ ebe nrụpụta ihe, dịkwa mfe. Naanị ihe nwere ike ịme nwụnye ntakịrị aghụghọ bụ ma ọ bụrụ na ịnwe nchara, ọkachasị n'ihu. Ọ bụrụ na gị n'ihu elu ujo aku na-ajari na gị na factory ujo, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ike bulie na elu.
Enweghị ohere dị ukwuu na mpaghara a, ị nweghị ike ịnweta diski ma ọ bụ ọbụlagodi n'ime ya. Ya mere, ana m akwado ịnweta ngwaike ngwaike niile na ezigbo oge yana ezigbo mmanụ na-abanye, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara nke kpatara nchara nchara na Jeep gị. Nke ahụ ga-akwụ ụgwọ mgbe ị wụnye nke a.
Kasị njọ ikpe ma ọ bụrụ na ihe na-ata nchara n'ezie na-etinye a mma ogologo baron na ya, i nwere ike ịkwụsị anya na eri na threaded mkpanaka si n'elu gị factory damper, ị ga-n'ezie na-eji na iji nweta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe damper nke ụzọ agbanyeghị. Dị ka anyị kwuru, omenala aka ngwaọrụ, ọkara otu awa a ujo, nnọọ mfe echichi. N'ihi na FOX nwere ọtụtụ afọ nke nyocha na mmepe nke mere ka ha gbaa ọsọ ma tinye ya n'ọdụ ụgbọ mmiri a, na eziokwu ahụ bụ na ha na-eji ihe ndị kachasị elu, karịsịa na arụmọrụ PerformanceSeries a, pụtara na onye a laghachiri na Top nke ọnụahịa ọnụahịa bụ .
Ujo a nwere ike ịgbata ihe ruru $ 100 karịa arụmọrụ PerformanceSeries 2.0. Y'oburu na ichoro iwere mgbanwe nke ebe a, o kwesiri ya kari $ 100.
Ọ bụrụ na ịnweghị iji ya, agbanyeghị, ịnwere ike ịchekwaa onwe gị $ 100 kwa igwe na-enweghị ụdị mgbanwe nke damper a. Ọ bụrụ na ịchọghị iji ọdọ mmiri, FOX's Performance 2.0 Series na-awụ akpata oyi n'ahụ dị ọnụ ala karịa na ọ nweghị ebe nchekwa, yabụ FOX nwere ọtụtụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ maka JK gị, ihe a niile ga-enye gị ezigbo akwa ride quality.
Nwere ike ịhọrọ ogo nhazi, ego ole ịchọrọ imefu yana ọrụ ị ga-enweta. Shock ga-adị elu karịa akara niile maka akụrụngwa na nhazi mma, ya mere na elu elu nke ọnụahịa ọnụahịa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ebe a na-etinye mmiri nke ọma maka JK nke ọma ma nwee ike idozi ya, nke a ga-abụrịrị arụmọrụ Performance Series si Fox.
Gha aghaghi ikwuputa ugwo na udiri ihe i nwetara, ma oburu na inwere mmefu ego ma choo uzo di oke nma, nke a bu ezigbo nhọrọ iji lee anya. Nke a bụ nyocha m nke edoziri agbanwe nke FOX 2.0 Performance Series Reservoir, kwesịrị ekwesị maka JK niile sitere na 2007, nke ị nwere ike ịchọta ebe a na extremeterrain.com
Kedu otu fox si arụ ọrụ na valve?
IheFox Live ValveSistemu nwere ọnọdụ abụọ: mepee ma mechie. Dabere na ozi sitere na ihe mmetụta, algorithm na-achịkwavalvụ. Oge otu mmetụta kụrụ ndụdụ ahụ, ọ na-emepe ndụdụ na ujo ahụ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na enwere mmetụta ọzọ mgbe nkwusioru ahụ mepere emepe, usoro ahụ ka ga-emeghe.28.08.2018
Kedu mgbe m kwesịrị ịkpọchi nkwusioru igwe kwụ otu ebe m?
Ọ na-abụkarị naanị oge ị ga-achọmkpọchiazụ gịujo(ma ọ bụ n'ihu.)ndụdụ) ga-abụ mgbe ị na-aga ogologo na-abụghị nka na ụzụ, ma ọ bụ ogologo njem ndị ọzọ.Nkwado igwe kwụ otu ebemgbe atụmatụ multiple ụdịdị, ka mma meliteigwe kwụ otu ebeịrị ma ọ bụ ịrịda, otu n'ime atụmatụ ndị a bụmkpọchi.
Ugbo elu ole ka m kwesiri itinye na ugba Fox?
Tinyeikukunrụgideiheisiikukuụlọ na ~ 50 psi (ogwe 3.4) increments, jiri nwayọ agba ịnyịnyaujomgbe ọ bụla 50 psi (ogwe 3.4) mgbakwunye. Nịmnke giisiikukuụlọ n'etiti 50-300psi iji kwadebe ịtọ sag dị ka akọwara naihe'NtọalaUjo ikukuNrụgide 'ngalaba n'okpuru.
Ndị Fox 2.0 na-awụ akpata oyi n'ahụ bara uru ego ahụ?
Foxịbụuru ego ahụbụ nke onye. Ha dị oke mmaegwu, enweghị mgbagha ọ bụla, mana emere ha maka ịrụ ọrụ na-apụ n'okporo ụzọ nwere ọtụtụ mberede ma ọ bụ ịgba ọsọ ọsọ ọsọ. Ha na-eme nke ọma na ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-abụrịrị ụgbọala n'okporo ámá, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma.
Kedu ihe dị mma nkịta ma ọ bụ Bilstein na-awụ akpata oyi n'ahụ?
Mkpebi ahụ dabere n’ihe ị chọrọ n’igwe gị. Nke ahụ kwuru, sị na-atụ anya na ị ga-esi na ya pụọFoxjiri ya tụnyereBilstein. Aluminom ahu nkeFox2.0egwunye di na nwunye di iche iche; Mkpa ọkụ n'ozuzu ibu, na ndị ọzọ ihe,mmaikpochapu ọkụ.
Kedu ka nsogbu valve na-arụ ọrụ si arụ ọrụ?
Agbụrụ-pụtaraNdụ Valvesistemụ na-eji sensọ iji kpokọta data oge 500 oge nke abụọ. Nke a pụtara ma ọ bụrụNdụ Valvena-ekpebi aujokwesịrị ịga ngwa ngwa ma nyekwuo nkasi obi n'oge dị n'ihu, ọ ga-ebelata preload na mmiri n'azụ agịga ahụ, nke ga-emeghevalvụ.06.05.2021
Kedu ihe bụ Fox Live Valve maka igwe kwụ otu ebe?
Kedu ihe bụ FOX Live Valve? Valve Live bụ otu obere nzọụkwụ maka ihe ijuanya, yana otu nnukwu itu ukwu maka teknụzụ usoro nkwusioru. Live Valve bụ sistemụ arụmọrụ anyị na-ejikwa elektrọnik na-achịkwa nke ọma maka UTVs, gwongworo, na igwe kwụ otu ebe.
Kedu mgbe Fox Live Valve mbụ pụtara?
Fox Live Valve, sistemụ nke na-ekwe nkwa ijikwa nkwusioru MTB iji kwado ala ahụ, anọla n'ihu ọha na pipeline ruo ọtụtụ afọ. Anyị buru ụzọ hụ ya na pro cross country na enduro racers 'anyịnya igwe azụ na 2015. Na nso nso a, anyị achọpụtala obere ịnyịnya ígwè ule nwere ihe ndozi maka teknụzụ dị ugbu a.
You chọrọ ntọala maka Fox Live Valve?
Akpa LIVE Valve kit maka Scott Bikes gụnyere chọrọ Contoller Pedestal na Frame Grommet dị ka egosiri n'okpuru. Ngwa AM Scott LIVE Valve niile ga-achọ Pedestal Mount Controller dị ka egosiri n'okpuru. Gafere eriri njikwa niile site na Pedestal, wee gafee eriri ndị ahụ site na grommet dị ka egosiri.
kedu ihe mere inine ji ato uto